Power-Supply Characteristics - China BST (kong) Industrial
Kune akawanda simba-zvitengeswa unhu kuti chokuita mashandiro avo:
Kukukurwa: The nzira dc goho voltage ave kushanda nguva dzose mutsetse voltage, mutoro, uye tembiricha ambient.
Dynamic Kupindura: A simba nerubatsiro anogona kushandiswa mune hurongwa apo pane chinodiwa kupa kutsanya simba norudaviro nokuchinja mutoro simba. Izvozvo zvinogona kuitika kuti mutoro mukuru-nokukurumidza microprocessors nesimba-utariri mabasa. Panyaya iyi, iyo microprocessor angava ari standby ezvinhu uye pamusoro murayiro anofanira kutanga kana kudzima pakarepo, izvo zvinoisa yakakwirira simba dzenzvimbo pamwe kutsanya murwere prices simba rive. Kuti anobvumawo microprocessor, kugoverwa wacho goho voltage anofanira mudzakisirwa kana pasi mukati yakati nguva chinguva, asi pasina kunyanya overshoot.
Kunyatsoshanda: Ratio kuti goho-kuti-chiyamuro simba (mu muzana), akayera pane imwe mutoro anoshandiswa chezita mutsetse ezvinhu (Pout / Pin).
Holdup nguva: Time apo simba nerubatsiro kuti goho voltage anoramba mukati Specification zvichitevera kurasikirwa chiyamuro simba.
Inrush razvino: Peak nguva imwe chiyamuro razvino wakavhomorwa achishandisa simba nerubatsiro panguva jana-mberi.
Nemitemo International: tsanangurai kuchengeteka zvinodiwa ane simba nerubatsiro uye kwaibvumirwa Ichimura (remagetsi chipingaidzo) zvese.
Kusurukirwa: Electrical zviparadzanise kwezvavakaisa goho ane simba nerubatsiro akayera mu volts. A non-yoga ane DC pakati mazano uye goho pamusoro pomugove nzira, nepo voga simba nerubatsiro inoshandisa transformer kubvisa dc pakati kwezvavakaisa goho nzira.
Line chengetedzo: Change mu kukosha washington dc goho voltage kunokonzerwa nokuchinja; ac chiyamuro voltage, raanotaura sezvo kuchinja ± MV kana ±%.
Mutoro chengetedzo: Change mu kukosha washington dc goho voltage kunokonzerwa nokuchinja mutoro kubva yakavhurika-redunhu kunonyanyisa-yavose sezvavakatarirwa goho razvino, raanotaura sezvo kuchinja ± MV kana ±%.
Output ruzha: Izvi zvinogona kuitika musimba wedzerai muchimiro watsemuka pfupi soro Frequency simba. Mubvumo kunokonzerwa kuchaja uye zvaikosha kuti parasitic capacitances mukati nesimba rezvokudya panguva yayo uchishandisa yatinofema. Amplitude wayo shanduka uye anogona kuvimba mutoro impedance, zvokunze mupise, uye sei zviri chipimo.
Periodic uye kurongwa kutsauka (PARD): vasingadiwi nguva nenguva (ripple) kana aperiodic (ruzha) kutsauka simba-romugove goho voltage kubva ayo chezita ukoshi. PARD runoratidzwa MV yepamusorosoro-kuti-nhamba kana rms, pane imwe chaiyo bandwidth.
Peak ano: The vaifanira kuitika kuti simba nerubatsiro inogona kwenguva pfupi.
Peak simba: Mhedziso kunonyanyisa goho simba kuti simba nerubatsiro anogona kubereka pasina kukuvara. Hazvina yemanyorero tsime mhiri chichiitwa rakavimbika goho simba kugona uye tinofanira chete kushandiswa Kazhinji.
Power-zvitengeswa sequencing: Sequential dzokai-iri uye kure nesimba rinopiwa kungadiwa mune hurongwa multiple uchishandisa voltages. Kureva, voltages rinofanira kuiswa mune imwe urongwa, zvimwe ari maitiro inogona sousingabatsiri. Somuenzaniso, pashure kushandisa voltage wokutanga uye zvasvika chairo ukoshi, mumwe voltage yechipiri inogona ramped kumusoro, uye zvichingodaro. Sequencing anoshanda zvisizvo kana simba hwaputswa, kunyange kukurumidza hakusi zvikuru dambudziko kazhinji sezvo jana-mberi.
Kure mberi / kure: Izvi Zvinosarudzwa pamusoro haizoshandisi kutsausa simba rinopiwa pamusoro uye kure. Power-zvitengeswa Data-jira nokurondedzerwa kazhinji muudzame dc parameters kuti kure pamusoro / kure, uchinyora pamusoro uye kubvisa pfungwa mumatunhu kunodiwa.
Kure pfungwa: A chaiwo simba nerubatsiro monitors rayo goho voltage uye anodyisa chikamu kuidzosera romugove kupa voltage mutemo. Nenzira iyi, kana goho ruchigona kumuka kana pasi, inofambiswa anoita romugove wacho goho voltage. Zvisinei, kuti tirambe tiine dzose goho panguva mutoro, chaizvoizvo simba romugove vanofanira kuongorora voltage panguva mutoro. Asi, vavanozivana kubva simba wedzerai kuti goho nomutoro wayo vane nemishonga uye ano kuerera kuburikidza navo kuti pave voltage donhwe kuti pave voltage musiyano pakati romugove kuti goho uye chaidzo mutoro. Nokuti Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri murau, kuti voltage zvokudya kudzokera simba romugove inofanira kuva chaiko mutoro voltage. Romugove maviri (ndinoiitawo uye kubvisa) kure pfungwa kwokubatana kuongorora chaiko mutoro voltage, chikamu uko ipapo zvokudya akadzokera romugove zvishomanene voltage donhwe nekuti magetsi kuburikidza maviri kure pfungwa kwokubatana yakaderera chaizvo. Somugumisiro, mashoko voltage kureva mutoro inodzorwa.
Ripple: kugadzirisa uye inonzwika apo munhu nokuchinja simba nerubatsiro kuti goho kunoguma imwe rokuti č (ripple) kuti akatasva ayo DC goho. Ripple maitikiro vamwe chinokosha akawanda pamusoro convert wacho nokuchinja kakawanda, izvo kunobva convert topology. Ripple achiri dzisisina nokuda mutoro ano, asi zvinogona yakaderera nezvikamu zvokunze capacitor mupise.
Club: Kana kushandisa vakawanda goho simba rinopiwa hwokuti munhu kana kupfuura outputs kutevera mumwe chete kuchinja mumutsetse, mutoro, uye tembiricha kuti mumwe anoramba chete Proportional goho voltage, mukati yakanatsa Tracking kushivirira, noruremekedzo rwakafanana ukoshi.